Mikarafoonkee loo doortaa inuu duubo kaamil ah | Wararka Gadget
Waa tee makarafoonka la doorto si loo sameeyo duubis kaamil ah
Luis Padilla | | Gargaarka, Sawir iyo dhawaq
Doorashada makarafoon ma aha hawl fudud. Sida had iyo jeer ka dhacda wax kasta oo la xiriira tikniyoolajiyadda, raqiis ahaan dhamaadka aakhirka waxay isu rogtaa inay qaali tahay, qaalina ma ballanqaadayso inay ugu fiican tahay ujeeddooyinkaaga. Bixinta makarafoonadu waa mid weyn oo noocyada kala duwan ee makarafoonada ayaa si fiican ugu habboon baahiyaha qaarkood laakiin kuma haboona kuwa kale. Dynamic ama isku-urursade? XLR ama USB? Isbeddel dhan ama Cardioid ah? Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa waa maxay noocyada kala duwan ee makarafoonku iyo xaaladaha ay ku habboon yihiin ugu habboonSidan oo kale, waxaad ku dooran kartaa khatar yar oo ah inaad qalad sameyso oo aad ogaato waxa aad lacagta ku qarash gareyneyso, maxaa yeelay qarash gareynta badan maahan marwalba inaad kaheleyso natiijooyin wanaagsan
1 Noocyada makarafoonka
1.1 USB ama XLR
1.2 Ujeedo ama jiheyn
1.3 Dynamic ama isku-urursade
2 Tusaalooyinka makarafoonada
Waxaa jira siyaabo badan oo loo kala saaro mikrofoon laakiin halkan waxaan diirada ku saari doonaa kuwa ugu muhiimsan:
Waxay kuxirantahay nooca isku xirka: USB ama XLR.
Marka loo eego jiheyntiisa: omnidirectional ama jiho.
Waxay kuxirantahay nooca xuubka: firfircoonaanta ama isku-urursade.
USB ama XLR
Badanaa markaad bilowdo adduunka duubista waxaad marka hore fiirineysaa makarafoonada USB-ga. Way jaban yihiin waxayna ku siinayaan wax kasta oo aad u baahan tahay adigoon iibsan qalab kale. Microphone-yada sUSB waxay ku xirmaan kumbuyuutarkaaga iyagoo maraya fiilada ay ku darayaan waxaadna bilaabi kartaa inaad lashaqeyso. Si kastaba ha noqotee, qof kasta oo go'aan ka gaara makarafoonka noocan ah aakhirka wuxuu u boodayaa XLR. Mics-ka USB-ga guud ahaan waxay bixiyaan tayada dhismaha oo liidata, ugu yaraan kuwa ku jira qiime aad u jaban, oo maqalka aad la heleysaana waa isla tayo hooseeya. Had iyo jeer iyagu waa makarafoon sidaa darteed waxay ku habboon yihiin isticmaalka marmar iyada oo aan loo baahnayn baahi weyn.
Makarafoonada XLR badanaa waxay bixiyaan ikhtiyaarro badan oo badan markii la dooranayo tusaalaha, iyo In kasta oo makarafoonka laftiisu badanaa qaali ahayn (in kastoo ay jiraan wax walba) haddana wuxuu u baahan yahay qalab dheeri ah si uu ugula xiriiro kombuyuutarkaaga. Mashiinka isku xira kumbuyuutarka ee aad ku xidhi doonto makarafoonka ayaa ah mid qasab ah, ama ugu yaraan isdhexgalka XLR ka fudud kan wax lagu qasayo. Dhowr maalmood ka hor waxaan ku siiyay dib-u-eegis ku saabsan qashan Behringer Q802USB in qiimaha iyo waxqabadka ay tahay ikhtiyaar aad u fiican oo lagu daro noocyada makarafoonnada. Taa bedelkeeda, markaad rabto inaad bedesho makarafoonka, waxaad si fudud u samayn kartaa adigoo ilaalinaya qalabka intiisa kale, tayada codka ee aad heli doontaa ayaa aad uga sii fiicnaan doonta.
Ujeedo ama jiheyn
Waxay kuxirantahay sida ay uqabsadaan codka, waxaad kala dooran kartaa inta udhaxeysa dhinac u janjeedh (dhinac walba ka socota) ama jiho. Kuwaas waxaa ugu caansan "wadnaha"loogu yeero maxaa yeelay waxay u qabtaan dhawaaqa "qalbi", mudnaanta waxa hortiisa ku qotoma oo iska indha tiraya waxa ka dambeeya.
Micsiga Omnidirectional wuxuu bixiyaa dhawaaqyo badan oo kala duwan tan iyo markii ay qabsadeen wax kasta oo hareerahooda ah, marka iyagu waa kuwo ku habboon markaan si sax ah u dooneyno taas, laakiin hase yeeshe haddii waxa aan dooneyno ay taasi yihiin Waxaan kaliya dhegeysaneynaa nafteena adigoonan khalkhal ku haynin baabuurta soo agmaraysa, waa inaan markaa doorannaa microid-ka wadnaha taasi waxay kaliya kor u qaadeysaa dhawaqayaga oo diidaya inta hartay.
Dynamic ama isku-urursade
Makarafoonada firfircoon ayaa ah kuwo aad u adag, waxay ku sii noolaan doonaan intaad nooshahay mooyee inaad si ula kac ah ula dhaqanto mooyee. Waxay sidoo kale u adkaystaan ​​huurka. Uma baahna ilo awood oo ay ku shaqeeyaan, taas oo ah mid aad u xiiso badan, waxayna sidoo kale si fiican ula macaamilaan mugga sare iyaga oo aan qalloocin Waxay u nugul yahiin xasaasiyadda dhawaqyada hareerahayaga ka socda, laakiin si kastaba ha noqotee waxay aad ugu nugul yihiin soo saarista "boodhadh", buuq xanaaqa oo dhaca marka la dhawaaqo xarafka "P" oo si fudud loogu tirtiro shaandhada "anti-pop" .
Makarafoonada Kondenserku waxay leeyihiin tayo sare oo maqal ah laakiin illaa inta lagu duubay xaaladaha ugu wanaagsan. Iyagu waa kuwo xasaasi ah waxayna qabtaan dhammaan noocyada buuqyada, sidaa darteed haddii aad wax ku duubato istuudiyaha leh darbiyada suuxsan oo aad aamusnaato natiijadu aad ayey u fiicnaan doontaa, laakiin haddii aad ku dhex sameyso qolkaaga guud ahaan waxay ku siin doonaan madax-xanuun badan maxaa yeelay waxay qaban doontaa dhammaan noocyada gariirka, dhawaaqyada, guuxa banaanka ...
Samson SAGO Mic waa tusaale kaamil ah waxa makarafoonka USB uu na siin karo. Waa makarafoonka iskuxiraha kumbuyuutarka wuxuuna noqon karaa omidirectional ama cardioid mahadnaq shidashada dhinaca. Qiimo aad macquul u ah (-35 40-XNUMX), maarayn aad u fudud iyo naqshad ku habboon in mar walba lagu qaado. Hal fiilo oo USB ah si aad ugu xirto kumbuyuutarkaaga ayaa u adeegta si ay u siiso awood ku filan oo ay ku shaqeyso, sidoo kale waxay leedahay wax soo saar sameecadeed si ay ula socoto codka. Si kastaba ha noqotee, tayada codka ee ay na siiso ayaa ku filan inay lasocoto duubista fiidiyowga yar laakiin ma ahan in lagu gaaro natiijooyin wanaagsan. Waxaad ku heleysaa Amazon hadda € 33.
Microphone-ka Buluugga ah ee Blue Microphones YETI wuxuu muddo dheer ka mid ahaa kuwa ugu badan ee lagula taliyo in la daadiyo. Qiimo aad u sarreysa (125-150 €) iyo isku xirnaanta USB-ga ayaa ka dhigaya musharrax weyn kuwa raadinaya wax fudud oo la awoodi karo. Kani waa makarafoon weyn oo diaphragm condenser ah, oo macnaheedu yahay waxay qaban doontaa duqsi kasta oo ugu dambeeya ee u duulaya qolkaaga. In kasta oo ay bixinayso suurtagalnimada xulashada qaabab kala duwan (omnidirectional, cardioid, bidirectional ...) waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho qolalka u qalabeysan wax lagu qoro sidaasna looga fogaado dhawaqyada iyo buuqyada kale. Waxaad ku heleysaa Amazon qiimaha € 126.
Mid ka mid ah xulashooyinka la awoodi karo ee leh natiijooyinka wanaagsan (qiimaha ay leedahay) waa Behringer Ultravoice XM8500. Makarafoonka firfircoon ee wadnaha oo leh xiriir XLR ah oo kafiican inta badan xaaladaha badankood. Aniga ayaa ah kan aan ku isticmaalo aaladaha aan horay u tilmaamay natiijaduna waa mid aad u wanaagsan, aniga oo aan qabsan dhawaqii qolka. Sida noocyada miskaha oo kale, pop waa dhibaato laakiin waxaa lagu yareyn karaa iyadoo laga hadlo masaafada ku habboon ama la iibsado shaandho. Waxaa lagu qiimeeyaa .19,90 XNUMX on Amazon taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar ku habboon in lagu bilaabo duubistaada.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee duubista duubista shaki la'aan waa makarafoonka Shure SM58.. Sida tii hore waa mid firfircoon, wadnaha iyo XLR. Tayada maqalka ah ee ay gaarto waa mid aad u wanaagsan waana sababtaas tan ay u tahay doorashada dad badan oo wax duuba, kooxo dhagaxa weyn leh iyo xitaa wacdiyayaal jooga Mareykanka. Sida iska cad qiimaheeda waa ka sareeyaa qaabkii hore ee aan soo sheegay, ee gaaraya € 125 ee Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Gargaarka » Waa tee makarafoonka la doorto si loo sameeyo duubis kaamil ah
6 taleefan oo casri ah oo aad ku iibsan karto wax ka yar 300 euro oo iyagu kuma niyad jabi doonaan
Madow Jimco 2015; qiimo dhimis, dalabyo iyo waxyaabo kale oo badan